Waa la daabacay10.05.2022
Haddii aad tahay muwaadin dal Mdowga Yurub ka tirsan, uma baahnid ogolaanshaha joogitaanka Finland. Haddii Finland deggan tahay wakhti ka badan saddex bilood, waa in aad diiwaangelsiaa xuquuqdaada joogitaanka.
Taasina waxay quseysaa muwaadiniinta Switzerland iyo Liechtenstein. Waad imaan kartaa Finland, haddii aad haysato kaarka aqoonsiga ama baasaboor shaqaynaya. Waxaad si lamid ah muwaadiniinta Finland xaq u leedahay in aad Finland ka shaqeyso, ganacsade ka noqoto ama wax ka barato. Waa in aad Finland ku haysataa dhaqaalaha noloshaada.
Finland waxaa si xiriir ah wax uga baran kartaa saddex bilood adigoo aan diiwaangelin xuquuqdaada joogitaanka dalka. Haddii aad doonayso in aad Finland joogto degane ahaanna isaga diiwaangeliso, waa in aad haysataa shaqo ama shirkad shaqanaysa, boos waxbarasho, xiriir qoys oo wakhti dheer ah ama lacag ku filan.
Haddii aad ku talajirto in aad saddex bilood ka badan deganaato Finland, waa in aad ka codsataa Hogaanka socdaaalka (Maahanmuuttovirasto) diiwaangelinta xaqa joogitaanka ee muwaadinka Midowga Yurub. Codsiga waa in la sameeyaa ugu dambayn saddex bilood gudohood oo ka billaabanaysa maalinta dalka la yimid.
Faahfaahin dheeraad ah ka aqri bogga InfoFinland: Diiwaangelinta xaqa joogitaanka muwaadinka Midowga Yurub .
Haddii aad Finland si rasmi ah ugu soo guurto ugu yaraan muddo sannad ah islamarkaasna aad doonayso guri-degmo, ku wargeli guuritaankaada Hay’adda dijitaalka iyo macluumaadka dadka (Digi- ja väestötietojärjestelmä). Haddii aad guri degmo (kotikunta) ku leedahay Finland , sida caadiga ah waxaad xaq u leedahay in aad isticmaasho adeegyada degmada.
Faahfaahin dheeraad ah ka aqri bogga InfoFinland: Guri degmo ee gudaha Finland .
Haddii aad ku talajirto in aad Finland degnaato wax sannad ka yar ama aadan doonayn guri degmo, waxaad codsan kartaa in nidaamka macluumaadka dadka lagaaga diiwaangeliyo cinwaan ku meelgaar ah.
Faahfaahin dheeraad ah ka aqri bogga InfoFinland: Isu diiwaangelin degene .
Haddii aad si xiriir ah u joogayso Finladn wax ka yar saddex bilood, uma baahnid in aad codsato diiwaangelinta xaqa joogitaanka dalka. Joogitaanka saddexda bilood ah waxaa markasta laga tiranayaa, marka aad bannaanka uga baxdo xuduudaha Finland.
Faahfaahin ku saabsan saamaynta uu fayruska Korona ku leeyahay gaadiidka xuduudaha ka aqri bogga InfoFinland: Fayruska Korona iyo u soo guuridda Finland .
Haddii aad tahay muwaadin Midowga Yurub Finland uguma baahnid ruqsad shaqo. Horay ayaad shaqo ka billaabi kartaa marka aad dalka timaado.
Kaarka canshuurta ka soo qaado Xafiiska Canshuurta ee kuugu dhow kaddibna u gee shaqo-bixiyahaada. Bixinta mushaarka iyo canshuurta darteed ayuu shaqo-bixiyuhu ugu baahan yahay kaarka.
Waxaad u baahan yahay aqoonsiga qofka ee Finnishka. Ka codsi Hay’adda dijitaalka iyo macluumaadka dadka ama xafiiska canshuurta. Horay oray u sii qaado kaarka aqoonsiga ama baasaboor shaqeynaya iyo heshiiska shaqada.
Haddii ay shaqadaada Finland qaadanayso wax ka badan 3 bilood, ka codso adeegga Enter Finland ama Hoggaanka Socdaalka Finland ama goobta adeegga Hoggaanka socdaalka ee kuugu dhow diiwaangelinta xaqa joogitaanka ee muwaadinka Midowga Yurub.
Haddii aad ku talajirto in aad Finland deganaato wax sannad ka yar ama aadan doonayn guri degmo, waxaad codsan kartaa in nidaamka macluumaadka dadka lagaaga diiwaangeliyo cinwaan ku meelgaar ah.
Haddii aad dibadda uga timid Finland si aad uga shaqeyso waxaad u baahan tahay aqoonsiga qofka ee Finnishka. Aqoonsiga qofka waxaad ka heli kartaa:
Hay’adda dijitaalka iyo macluumaadka dadka,
xafiiska Canshuurta ama
Hoggaanka socdaalka islamarka aad diinwaagelinayso xaqa joogitaanka ee muwaadinka Midowga Yurub.
Haddii aad aqoonsiga qofka ka heshay Hoggaanka socdaalka ama Maamulka canshuuraha, laakiin aad doonayso in cinwaankaada iyo macluumaadka xiriirka qoyska la kaydiyo, waa in aad kuwaas diiwaangelitooda ka codsataa Hay’adda dijitaalka iyo macluumaadka dadka.
Kaadhka canshuurta iyo lambarka canshuurta
Dhammaan dadka ka shaqeynaya Finland waa in ay heystaan kaarka canshuurta (verokortti). Haddii aad ka shaqayso dhismaha waxaad sidoo kale u baahan tahay lambarka canshuurta. Kaarka canshuurta iyo lambarka canshuurta waxaad ka heli kartaa xafiiska canshuurta.
Faahfaahin dheeraad ah ka aqri bogga InfoFinland: Xuquuqda iyo waajibaadka shaqaalaha .
Shaqo Raadinta Finland
Haddii aad tahay muwaadin Midowga Yurub ah, waad imaan kartaa Finland si aad shaqo uga raadsato waqti macquul ah.
Shaqo raadin darteed isagama diiwaangelin kartid Finland sidii degane oo kale mana codsan kartid diiwaangelinta xaqa joogitaanka. Si aad u degnaato Finland, waa in aad heysataa shaqo ama sabab kale ee kor lagu soo sheegay iyo dhaqaale kuugu filan nolosha.
Haddii aad wadankaada ku heysatay xaqa magdhowga shaqo la’aanta, waxaa si ku meelgaar ah laguugu soo diri karaa Finland. Magdhowga shaqo la’aanta si Finland laguugu soo diro waxaad ku codsan kartaa foomka E303 ama U2. Foomka waxaad ka heleysaa saraakiisha xoogga shaqada ee dalkaada.
Haddii aad Finland u timaado shaqo raadin, sida caadiga ah Finland kama heli kartid magdhowga shaqo la’aanta.
Faahfaahin dheeraad ah ka aqri bogga InfoFinland: Shaqo ka helista Finland .
Wareejinta siinta lacagta shaqolaawahaLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Haddii aad tahay muwaadin Midowga Yurub ah Finland waad ka aasaasan kartaa shirkad, haddii aad deegaan rasmi ah ku leedahay wadan ka tirsan Soonaha Dhaqaalaha Yurub (ETA). Shirkad ajnabi ah waxey xittaa Finland ka billaabi kartaa shaqo shirkadeed.
Billaabista shaqada shirkadda ka samee ogeysiiska aasaasidda Diiwaanka ganacsiga ee Maamulka diiwaanka iyo ruqsadaha iyo Maamulka canshuurta.
Haddii uu joogitaankaada Finland qaadanayo wax ka badan 3 bilood, ka codso adeegga Enter Finland ama Hoggaanka Socdaalka Finland ama goobta adeegga Hoggaanka socdaalka ee kuugu dhow diiwaangelinta xaqa joogitaanka ee muwaadinka Midowga Yurub.
Ogeysiiska aasaasidda shirkad
Marka ugu horeysa ee aad diiwaangelinayso shirkadaada, waa in aad buuxisaa ogeysiiska aasaasidda shirkadda (perustamisilmoitus) islamarkaasna aad geysaa lifaaqyada loo baahan yahay. Macluumaadka shirkadda waxaad foomka Y oo kaliya ku ogeysiin kartaa Diiwaanka ganacsiga ee Maamulka diiwaanka iyo ruqsadaha Maamulka canshuurta. Waxaa kale ogeysiiska aasaasidda in lagu lifaaqo loo baahan karaa qoraal ay bixiyeen saraakiisha dowladdaada oo u dhigma qoraalka diiwaanka ganacsiga ee Finnishka.
Faahfaahin dheeraad ah ka aqri bogga InfoFinalnd: Shirkad ganacsi ku samaynta Finland .
Ganacsade ahaan ku imaansho Finland: Ogolaanshahee ayaad u?Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaPatentti- ja rekisterihallitus
Ogeysiinta samaynta shirkad cusubLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Haddii aad tahay muwaadin Midowga Yurub waad codsan kartaa in aad wax ka barato machad Finland laga aqbalsan yahay.
Haddii ay waxbarashadaada Finland qaadanayso wax ka badan 3 bilood, ka codso adeegga Enter Finland - ama Hoggaanka Socdaalka Finland ama goobta adeegga Hoggaanka socdaalka ee kuugu dhow diiwaangelinta xaqa joogitaanka ee muwaadinka Midowga Yurub.
Haddii aad si xiriir ah u joogayso Finland wax ka yar saddex bilood, uma baahnid in aad codsato diiwaangelinta xaqa joogitaanka dalka. Joogitaanka saddexda bilood ah waxaa markasta laga tiranayaa, marka aad bannaanka uga baxdo xuduudaha Finland. Xeerkan wuxuu quseeya tusaale ahaan ardayga beddelka ah ee Finland wax ku baranaya muddo gaaban oo kaliya (tusaale afar bilood). Haddii aad mararka qaar ka baxdo Finland oo aadan si xiriir ah u joogin wadanka saddex bilood, markaas uma baahnid in aad codsato diiwaangelinta xaqa joogitaanka. Marka ay sidan tahay raadso aqoonsiga qofka ee Finnishka islamarkaasna ogeysii Hay’adda dijitaalka iyo macluumaadka dadka macluumaadka cinwaankaada.
Faahfaahin dheeraad ah ka aqri bogga InfoFinland: Ardayga ajnabiga ah ee jooga Finland .
Haddii aad tahay muwaadin Midowga Yurub ah aadna Finland ugu soo guureyso si aad ula degtid xubin qoyskaada ka mid ah, waa in aad diiwaangelinta xaqa joogitaanka ee muwaadinka Midowga Yurub uga codsataa xiriir qoys adeegga Enter Finland ama goobta adeegga ee Hoggaanka socdaalka.
Haddii aadan aheyn muwaadin Midowga Yurub ah, laakiin xubinta qoyskaada ka tirsan ee Finland deggan uu yahay muwaadin Midowga Yurub waxaad u baahan tahay kaarka joogitaanka ee xubinta qoyska muwaadinta Midowga Yurub. Waxaa kaarka laga codsadaa adeegga Enter Finland ama goobta Adeegga Hoggaanka socdaalka.
Si loo diiwaangeliyo xubinta qoys ee muwaadinka Midowga Yurub waxaa loo baahan yahay in qofka deggan Finland uu heysto hanti ku filan masruufidda naftiisa iyo xubinta qoyskiisa ee Finland u soo guuraya.
Xubin qoys ama ehel kale waxaa noqon kara:
qof aad isqabtaan ama rafiiq ku jira diiwaanka xiriirka lammaanaha
qof aad guur furan ku jirtaan oo aad wada-nooleydeen ugu yaraan labo sano ama uu idinka dhexeeyo cunug aad mas’uul ka wada tihiin
cunug aad mas’uul ka tahay oo ka yar 21 sano, cunugaada cunugiisa
cunug ay qofka aad is-qabtaan mas’uul ka tahay oo ka yar 21 sano, cunugeeda cunugiisa
waalid, waalidka waalidkiis oo aad mas’uul ka tahay
waalidka waalidkiis ee ay mas’uul ka tahay qofka aad is-qabtaan
waalidka cunugga ka yar 21 sano
Xittaa cunugga ku dhasha Finland ee noqonaya muwaadin wadan ka tirsan Midowga Yurub, Liechtenstein ama Switzerland waa in loo codsadaa diiwaangelinta xaqa joogitaanka. Diiwaangelinta waa in la codsadaa saddex bilood gudahood laga soo billaabo dhalashada cunugga.
Faahfaahin dheeraad ah oo mowduuca ku saabsan ka sii aqri bogga InfoFinlandi: Finland markii uu ilmuhu dhaso .
Marka aad sababo xiriir qoys ah ugu soo guureyso Finland waxaad heysataa xaqa shaqo sameynta oo aan xad laheyn iyo xaq aad wax uga baran karto Finland.
Haddii aad tahay muwaadin Midowga Yurub ah waad imaan kartaa Finland haddii aad heysato baasaboor ama kaar aqoonsi islamarkaasna aan lagaa mamnuucin imaanshaha dalka.
Haddii aad u joogeyso Finland si ku meel gaar ah, waxaad heli kartaa aqoonsiga qofka ee Finnishka, haddii aad ugu baahantahay tusaale ahaan shaqo darteed. Waxaad ka codsan kartaa aqoonsiga qofka islamarkaasna degitaanka ku meel gaarka ah ka diiwaangelin kartaagoobta adeegga Hay’adda dijitaalka iyo macluumaadka dadka (Digi- ja väestötietovirasto) ee kuugu dhow ama Xafiiska Canshuurta (verotoimisto). Horay u sii qaado kaar aqoonsiga ama baasaboor shaqeynaya.
Haddii joogitaankaada ku meel gaarka ah uu si xiriir ah u soconayo wax ka badan saddex bilood, waxaad sidoo kale u baahantahay shahaadada diiwaangelinta ee xaqa joogitaanka muwaadinka Midowga Yurub.
Faahfaahin dheeraad ah oo mowduuca ka saabsaan ka sii aqri: Diiwaangelinta xaqa joogitaanka muwaadinka Midowga Yurub .
Haddii aad si ku meel gaar ah u deggan tahay Finland, guri degmo si toos ah kuuguma diiwaangeleyso mana heysatid xuquuq la mid ah kuwa uu heysto qofka sida rasmiga ah u deggan Finland.
Safar ku joogista Finland
Haddii aad tahay muwaadin u dhashay Midowga Yurub, Liechtenstein ama Switzerland aadna dooneyso in aad safar ku timaado Finland waqti gaaban, tusaale ahaan safar fasax, safar ganacsi ama aad booqasho ugu imaaneyso qaraabadaada, uma baahnid fiiso. Waad imaan kartaa Finland haddii aad heysato kaar aqoonsiga ama baasaboor shaqeynaya.
Haddii aad Finland ku joogto musaafur aadna gasho xaalad adag, la xiriir safaaradda dalkaada. Safaaraddu wey ku caawin kartaa adiga haddii aad shil gashay, jirato ama aad noqoto dhibane dembi. Safaaraddu waxey sidoo kale ku siin kartaa baasaboor cusub haddii uu baasaboorkaadu kaa lumo ama lagaa xado.
Wakiilada wadamada kale ee FinlandLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Wadamada Midowga Yurub Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
La-talinta muwaadiniinta Midowga YurubLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaEuroopan komissio
Kaarka caafimaadka EU gaLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa